ကမ္ဘာ့ဖလားအကူအညီအထောက်အပံ့များနေ့၌လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည် 1St ဒီဇင်ဘာ AIDS ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. လူထုအသိပညာပေးရန် (ရယူ Immuno Deficiency Syndrome). AIDS ရောဂါကြောင့်လူ့ Immunodeficiency Virus ကို၏ရောဂါကူးစက်စေတဲ့ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါသည် (HIV ပိုး). အဆိုပါနေ့ကအစိုးရကိုအဖွဲ့အစည်းများကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, အဲန်ဂျီအိုများ, အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့် ပတ်သက်. မိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်ဖိုရမ်များဆွေးနွေးမှုစည်းရုံးရေးအားဖြင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအရာရှိများ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ယခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အဘို့အတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကြေငြာကြေငြာ 1995 လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကိုဖြတ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေအားဖြင့်အောက်ပါစတင်ခဲ့သည့်. ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်အရ, လှည့်ပတ် 25 လူဦးရေသန်းကနေသေဆုံး 1981 သို့ 2007 အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် HIV ပိုးကူးစက်မှု. တောင်မှနေရာအများအပြားမှာ ART ဆေးကုသ၏ access ကိုအပြီး, လှည့်ပတ်2လူဦးရေသန်း (အနည်းဆုံး 270,000 စုစုပေါင်းကလေးများဖြစ်ကြသည်) တွင် 2007 ဒီကပ်ရောဂါရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရ.
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အခမ်းအနားနိုင်ငံတကာကအရှိဆုံးအသိအမှတ်ပြုကျန်းမာရေးရက်ပေါင်းအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဖြစ်လာသည်. ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အခမ်းအနားကလူတို့တွင်အသိပညာတိုးပွားစေဖို့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျးမြားမှတံခါးသော့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း, အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောကုသမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုများဆွေးနွေးခြင်း.
ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ 2017 သောကြာနေ့မှာကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း, အပေါ် 1St ဒီဇင်ဘာ.
World AIDS Day နောက်ခံ
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ပထမဦးဆုံးသောမတ်စ် Netter နှင့်ဂျိမ်းစ်ဒဗလျူအားဖြင့်မြင်ခဲ့သည်. သြဂုတ်လအတွင်းက၏လ၌ Bunn 1987. သောမတ်စ် Netter နှင့်ဂျိမ်းစ်ဒဗလျူ. Bunn နှစ်ခုစလုံး WHO ကမှာအေအိုင်ဒီအက်စ်ကို Global အစီအစဉ်များအတွက်အများပိုင်သတင်းအချက်အလက်အရာရှိများဖြစ်ကြသည် (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) ဂျီနီဗာရှိ, ဆွစ်ဇာလန်. သူတို့ကဒေါက်တာရန်အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ကအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကူး shared ခဲ့သည်. ယောနသန်ကမန်း (အေအိုင်ဒီအက်စ်ကို Global အစီအစဉ်၏ဒါရိုက်တာ), စိတ်ကူးအတည်ပြုခြင်းနှင့်ပေါ်တွင်ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ကငျြးပအကြံပြုခဲ့သူ 1St ယခုနှစ်အတွက်ဒီဇင်ဘာ 1988.
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့အခမ်းအနားအပေါ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပခံရဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခဲ့သည် 1St ဒီဇင်ဘာတိကျစွာ. သူတို့ကဝေးရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကနေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သင့်ကြောင်းထင်, ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အခြားအားလပ်ရက်. ဒါဟာလူများနှင့်သတင်းမီဒီယာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကိုဖြတ်ပြီးသတင်းထုတ်လွှင့်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အာရုံစိုက်နိုင်သည့်အခါအချိန်ကာလအတွင်းကျင်းပရပါမည်.
HIV / AIDS ရောဂါအပေါ်ပူးတွဲကုလသမဂ္ဂအစီအစဉ်, ထို့အပြင် UNAIDS ၏အဖြစ်လူသိများ, ယခုနှစ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်သို့ကြွတော်မူ 1996 နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြှင့်တင်ရန်စတင်. အဲဒီအစားတစ်ဦးတည်းသာနေ့အဘို့ဂုဏ်ပြုခံရ, ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်ကင်ပိန်းယခုနှစ်အတွက် UNAIDS ရဲ့အားဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 1997 အေအိုင်ဒီအက်စ်အစီအစဉ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့, ပိုကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေး, မြေတပြင်လုံးတစ်နှစ်သင်ယူရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ရောဂါအသိပညာပေး.
အဆိုပါ စတင်. နှစ်များတွင်, ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ themes များသာအသားကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လူငယ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ, အရာမဆိုအသက်အရွယ်အုပ်စုမဆိုလူတစ်ဦး HIV ပိုးကူးစက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အကြာတွင်မိသားစုရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ. မှစ. 2007, ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့အိမ်ဖြူတော်အားဖြင့် AIDS ရောဂါဖဲကြိုးတစ်ခုအထင်ကရ display ကိုအားဖြင့်ပုံဆောင်တဲ့စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်.
World AIDS Day အဓိကအကွောငျးအရာ
UNAIDS ရဲ့ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရောဂါအကြောင်းကိုပိုကောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမြင်များအတွက်အထူးသဖြင့်နှစ်စဉ် themes များနှင့်အတူကျင်းပခံရဖို့စည်းရုံးရေးစတင်. ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့အပေါငျးတို့သနှစ်တွင်ပညာရှိသောသူ themes များစာရင်းဖြစ်ကြောင်းအောက်ပါ:
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1988 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "ဆက်သွယ်ရေး".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1989 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "လူငယ်".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1990 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အမျိုးသမီးများနှင့် AIDS ရောဂါ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1991 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "ဟုအဆိုပါစိန်ခေါ်မျှဝေခြင်း".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1992 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "လူထုကတိသစ္စာ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1993 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "ဥပဒေ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1994 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်မိသားစု".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1995 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Shared ခငြ့်အရေး, shared တာဝန်များ ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1996 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "တစျခုမှာကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်တစ်ခုမှာမျှော်လင့်".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1997 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Living ကလေးများ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1998 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, ပြောင်းလဲမှုအတွက် "အင်အားစု: လူငယျမြားနှင့်အတူကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်ကင်ပိန်း ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 1999 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Listen, သင်ကြား, အသက်ရှင်သော: ကလေးများနှင့်လူငယ်များအ "နဲ့ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်ကင်ပိန်း.
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2000 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "AIDS ရောဂါ: ယောက်ျားက "Difference Make.
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2001 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "ကျွန်တော်အရေးစိုက်သည်. သင် ... လုပ်ပါသလား"?
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2002 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အမည်းစက်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2003 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အမည်းစက်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2004 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "အမြိုးသမီးမြား, မိန်းကလေးများ, HIV နှင့် AIDS ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2005 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Stop AIDS ရောဂါ: "ဟုအဆိုပါကတိသိမ်းဆည်းထားပါ.
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2006 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Stop AIDS ရောဂါ: "ဟုအဆိုပါကတိ-ခံမှုသိမ်းဆည်းထားပါ.
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2007 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Stop AIDS ရောဂါ: အဆိုပါကတိသိမ်းဆည်းထားပါ- ခေါင်းဆောင်မှု ".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2008 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Stop AIDS ရောဂါ: "ဟုအဆိုပါကတိ-ခဲ-ဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့-ကယ်ယူသိမ်းဆည်းထားပါ.
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2009 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Universal Access ကိုနှင့်လူ့အခွင့်အရေး".
ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် 2010 ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "Universal Access ကိုနှင့်လူ့အခွင့်အရေး".
နှစ်မှစ. အဆိုပါဆောင်ပုဒ် 2011 သို့ 2015 ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက်ခဲ့သည်, "သုညမှရယူခြင်း: သုညသစ်ကို HIV ပိုးကူးစက်မှု. သုညခွဲခြားဆက်ဆံမှု. သုညအေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်ဆက်စပ်သောသေဆုံးမှု "
World AIDS Day လှုပ်ရှားမှုများ
လှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးဟာအသိအမြင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်၏သတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေဖို့ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ကအခမ်းအနား၏နေ့၌လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်. သူတို့ကအစီအစဉ်၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သကဲ့သို့လူတို့တွင်အသိအမြင်တိုးမြှင့်ရန်အလွန်လိုအပ်သောကြောင့်. အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ၏အချို့ကိုအောက်တွင်ရေးထားလျက်ရှိ၏:
လူထုအခြေပြုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကမ္ဘာ့ AIDS နေ့လှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်မှဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမည်, တစ်စီစဉ်ထားအစည်းအဝေးတွင်စုစည်းဖို့. ဒါဟာကောင်းစွာဒေသခံဆေးခန်းကနေစတင်ရနိုင်, ဆေးရုံများ, လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီများ, ကျောင်းများ, AIDS ရောဂါစည်းရုံးရေးအဖွဲ့များနှင့်စသည်တို့ကို.
လွတ်လပ်သောဖြစ်ရပ်များ၏တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ် sequence ကိုပုဖိုရမ်များမှတဆင့်စပီကာများနှင့်ပြသခဲ့သည်အားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အသိအမြင်ဘို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ပါသည်, စုဝေးပွဲကို, ကနျြးမာရေးဝိုင်း, အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ရပ်များ, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်န်ဆောင်မှုများ, စစ်ရေးပြ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပါတီများနှင့်စသည်တို့ကို.
တစ်ဦးကအများပြည်သူကြေညာချက်ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့အဘို့အသိအမှတ်ပြုမှုဖော်ထုတ်အေဂျင်စီဘုတ်အဖွဲ့မှတင်သွင်းနိုင်ပါသည်.
အနီရောင်ဖဲကြိုးကျောင်းများဖို့မျှော်လင့်ချက်အထိမ်းအမှတ်ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်, အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအုပ်စုများ. အီလက်ထရောနစ်ဖဲကြိုးလူမှုမီဒီယာကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်.
လူအားလုံးတို့သည်လှုပ်ရှားမှုများ (DVD ကိုပြ AIDS ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆွေးနွေးပွဲများနဲ့တူ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ကျောင်းများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများ, ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာနှင့်ဒေသခံအေဂျင်စီများသူတို့ရဲ့အကြီးအလုပျအတှကျအားပေးသင့်.
တစ်ဦးကဖယောင်းတိုင်စုဝေးရောက်ရှိအများပြည်သူပန်းခြံဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာအဆိုတော်တွေအနီးဆုံးအေဂျင်စီမှာကျင်းပနိုင်ပါသည်, ဂီတသမား, သိပ်ပြီးမ, ကဗျာဆရာတွေ, ဇာတ်လမ်း Teller နှင့်စသည်တို့ကိုဖျော်ဖြေမှုတင်ဆက်မှုမှတဆင့် AIDS ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး၏သတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေနိုင်.
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အေဂျင်စီ၏ web site ကိုမှသူကချိတ်ဆက်နေဖြင့်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်.
လူအားလုံးတို့သည်စီစဉ်ထားဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများပြီးသား e-mail ကိုတဆင့်ဖြန့်ဝေသင့်ပါတယ်, သတင်းလွှာ, မေးလ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်စာစောင်များ.
လူတွေကပြပွဲပြသခြင်းဖြင့်သတိပြုမိနိုင်ပါတယ်, ပိုစတာ, ဗီဒီယိုများ, Flyer, HIV / AIDS နှင့်စသည်တို့ကိုများအတွက်ဘရိုရှာ.
ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့လုပ်ငန်းများကိုဘလော့ဂ်များမှတဆင့်ချက်ချင်းလူများ၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုမှအကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်, Facebook က, Twitter သို့မဟုတ်အခြားလူမှုမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်.
တစ်ဦးကဖယောင်းတိုင်အခမ်းအနားကြောင့် HIV / AIDS ရောဂါမှသေဆုံးသွားသူတစ်ဦး၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကျင်းပနိုင်ပါသည်.
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ AIDS ရောဂါသည်းမခံခြင်းနှင့်သရေရှုတ်ချခြင်းအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုပြောဆိုရန်အားပေးတိုက်တွန်းကြသည်.
တစ်ဦးကဝန်ဆောင်မှုအစားအစာများများကိုစတင်နိုင်ပါသည်, အမိုးအကာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, HIV / AIDS ရောဂါနှင့်အတူလူတို့အဘို့အဖော်. သူတို့ကအစလူမှုရေးအလုပ်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်, သူတို့ရဲ့စာရိတ္တတိုးမြှင့်ဖို့ကိုးကှယျခွငျးသို့မဟုတျအခွားလုပ်ဆောင်ချက်များကို.
World AIDS Day ၏ရည်ရွယ်ချက် 2017
ကောင်းစွာအသစ်နှင့်ထိရောက်သောမူဝါဒများနှင့်အစီအစဉ်များကိုဖွင့်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုထောကျပံ့ဖို့ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့အခမ်းအနား၏ရည်ရွယ်ချက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, ကနျြးမာရေးစနစ်များကိုခိုင်ခံ့စေဖို့အဖြစ် HIV / AIDS ရောဂါဆီသို့ဦးတည်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင်များ၏စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့. ကမ္ဘာ့ AIDS ရောဂါနေ့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအချို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြတယ်:
တကမ္ဘာလုံးတွင် HIV / AIDS ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံတိုးမြှင့်များအတွက်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များလမ်းပြ.
အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်များအတွက်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကမ်းလှမ်းရန်, ဂရုမစိုက်အဖြစ်စမ်းသပ်အပါအဝင် HIV / AIDS ကုသရေး, ကလေးသူငယ်အခဖို့ရောဂါကူးစက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အမိ၏အကြံပေးခြင်း, ကာလသားထိန်းချုပ်မှုနှင့် antiretroviral ကုထုံး.
HIV / AIDS ရောဂါတိုက်သူတို့ကိုကူညီနိုင်သည့်အတွက် antiretroviral ဆေးသို့မဟုတ်အခြားကုန်စည်နှင့် ပတ်သက်. သတိပြုမိသည်လူများတို့အား.
လျော့ချခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်က HIV / AIDS ရောဂါကူးစက်လူနာအရေအတွက်ကအဖြစ်ကွန်ဒုံးများအတွက်ရွယ်တူအုပ်စုများအားပေးဖို့ရန်.
World AIDS Day ဆောင်ပုဒ်, Quote နဲ့ Message (ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ 2017)
"HIV / AIDS ရောဂါအဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ်ရှိပါတယ်".
ဝေဖန်သူများကကသစ္စာကိုဖျက်ခဲ့တယ်ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ကျွန်မကစားကို Safe လိင်ဆိတ်ကွယ်ရာကောက်ယူခဲ့သည်. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအေအိုင်ဒီအက်စ်ခဲ့သည့်အတွက်ကစားခဲ့, ဒါပေမယ့်ဇာတ်ကောင်ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေမယ့်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော ".
တစ်ဦးချင်းစီဖို့ "အသေးစားအကူအညီအထောက်အပံ့များ, ထုမှကြီးမားသောအကူအညီ ".
"AIDS ရောဂါတစ်ခုလုံးဝကြေကွဲဖွယ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်. AIDS ရောဂါ '' ဘုရားသခငျ့လက်စားချေအချို့ကိုမျိုးဖြစ်ခြင်း ပတ်သက်. အငြင်းအခုံ "ကင်လုပ်ခိုင်းဖြစ်ပါသည်.
"ကလေးတစ်ဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာ Give, ရယ်မောခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, မရ AIDS ရောဂါ ".
"ငါသည်သူ၏ဇနီးမှ AIDS ရောဂါပေးပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာနမ်းသူ impotent သူတယောက်သောသူသိပါ".
"သင်လူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင် အကယ်. သူတို့ကိုမချစ်ရန်မအချိန်ရှိသည်".
"ကျွန်တော်တို့ကိုဝှက်ထား H.I.V./AIDS မှလူသိရှင်ကြားပေးနှင့်မစို့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတီဘီကဲ့သို့သာမန်ဖျားနာနဲ့တူပေါ်လာစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း, ကင်ဆာနဲ့တူ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ H.I.V./AIDS ထဲကလာနှင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သေဆုံးထားပြီးပြောအမြဲဖြစ်ပါသည်, နဲ့လူ "ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကြောင့်နှင့် ပတ်သက်. ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်.
"ဒီ AIDS ရောဂါအကြောင်းပြောဆိုရန်ခက်ခဲကြောင်းတစ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်".
"ကျွန်မအေအိုင်ဒီအက်စ်အပေါ်ထွက်ကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်အနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုမအေအိုင်ဒီအက်စ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်. ငါကလူပါသေးဘယ်သူမှသင်ပေးနိုငျသောဤရောဂါရတဲ့ခဲ့ကြသည်နိုင်အောင်မျက် ထွက်. - သင်သွားရရန်ရှိသည် "!
"ငါ့သား AIDS ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားသည်ထားပါတယ်".
"သောကြောင့် AIDS ရောဂါအပေါ်ပညာရေး၏မရှိခြင်း၏, ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု, ကြောက်ရွံ့သောစိတ်, အလန့်တကြားဖြစ်ခြင်း, မုသာ "ငါ့ကိုဝိုငျး.
"သင်တစ်ဦးပွေ့ဖက်သို့မဟုတ်တစ်လက်ဆွဲသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူအစာစားရာမှ AIDS ရောဂါမရနိုငျသညျ".
"ဒီပစ္စည်းပစ္စယတော်တော်ကြောက်စရာဖြစ်ပါသည် AIDS. ငါကမရကြဘူးမျှော်လင့်ပါတယ် ".
AIDS ရောဂါ (ဝယ်ယူကိုယ်ခံစွမ်းအားချို့တဲ့ရောဂါသို့မဟုတ်ဝယ်ယူ immunodeficiency syndrome ရောဂါ) အဆိုပါ HIV ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွား (လူ့ immunodeficiency virus ကို) လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတိုက်ခိုက်ရန်အရာ. ဒီရောဂါရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် 1981. ဒါဟာပထမဦးဆုံး AIDS ရောဂါအပေါ်၏အမည်အားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် 27ကြိမ်မြောက် ယခုနှစ်ဇူလိုင်လ၏ 1982.
သူတို့ကချွဲအမြှေးပါးမှတဆင့်အစဉ်အဆက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြပါလျှင် HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုအလွယ်တကူလူတစ်ဦးအနေဖြင့်အခြားမှကူးစက်နိုင်ပါတယ်, ခန္ဓာကိုယ်အရည်သို့မဟုတ်အသှေးကို. အစောပိုင်းကာလများတွင်, HIV / AIDS ရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက်လူမှုရေးအမည်းစက်တွေအများကြီးရှိခဲ့. အဆိုပါခန့်မှန်းချက်အရ, ပတ်လည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည် 33 လူဦးရေသန်းဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပြီ2လူဦးရေသန်းနှစ်စဉ်ကြောင့်သေဆုံး.
HIV ပိုးကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏ T-ဆဲလ်ကိုတိုက်ဖျက်နှင့် AIDS အဖြစ်လူသိများရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသွေးကဲ့သို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရည်ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်, သုတ်ရည်, အင်္ဂါဇာတ်အရည်များ, သွေးသွင်းကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေဖြင့်အခြားသူများအားလွန်နိုင်သည့်ကူးစက်ခံရတဲ့လူတစ်ဦး၏ရင်သားနို့, ပါးစပ်လိင်, စအိုလိင်ဆက်ဆံ, အင်္ဂါဇာတ်လိင်သို့မဟုတ်ပိုးကိုဆေးထိုးအပ်ဆေးထိုးအပ်. ဒါဟာပေးပို့ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ရင်သားနို့တိုက်ကျွေးရေးမှတဆင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအားဖြင့်ကလေးလွန်နိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာအတွက်အစပြုခဲ့ပါသည် 19ကြိမ်မြောက် နှင့် 20ကြိမ်မြောက် အနောက်ဘက်-ဗဟိုအာဖရိက၏ဒေသတွင်း၌ရာစု. တကယ်တော့အဲဒီမှာကမဆိုရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းမရှိပေမယ့်ရောဂါ၏သင်တန်းဖွစျစနေိုအချို့ကုသမှုအားဖြင့်ဆင်းရသဏ္ဍာန်.
HIV / AIDS ရောဂါ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ
HIV / AIDS ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးကိုအောက်ပါလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်:
ဒါပေမဲ့, ဤရောဂါအများအပြားကိစ္စများတွင်ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ခဲသောကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကမည်သည့်ကာလအတွင်းတွင် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအကြောင်းမရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်နေကြသည်. အဆိုပါရောဂါရှိသူသည်ဤကာလအတွင်းမည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာခံစားရကျန်းမာပုံပေါ်ဘယ်တော့မှ.
ဒါပေမဲ့, HIV ပိုးကူးစက်မှုနှောင်းပိုင်းဇာတ်စင်အတွက် (ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကအားနည်းနေသည့်အခါ) လူတစ်ဦးအေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်အတူနာမကျန်းဖွံ့ဖြိုး. နှောင်းပိုင်းဇာတ်စင်ရောဂါကူးစက်မှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်အောက်ပါလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်းစတင်:
အဖျားရောဂါ (100f အထက်)
Kaposi sarcoma, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, အဆုတ်, စအို, အသည်း, ဦးခေါင်း, လည်ပင်းနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၏ကင်ဆာ (lymphoma).
နှောက်အမြှေးရောင်, encephalitis နှင့်အရံ neuropathy
အကူအညီ ပတ်သက်. လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပျံ့နှံ့သည့်အချို့သောဒဏ္ဍာရီရှိပါတယ်. AIDS ရောဂါဟာလက်လှုပ်မှတဆင့်ဖြန့်ဝေဘယ်တော့မှ, ဖက်သည်, ခြေ, အပြတ်အတောက်အသားအရေထိတွေ့သို့မဟုတ်တူညီသောအိမ်သာအသုံးပြုခြင်း.
လူကြိုက်များကောလိပ်များလက်အောက်တွင် du (ဒေလီတက္ကသိုလ်) »